कालापानी–लिपुलेक सवालमा सरकारसँगै छन् मधेसी समुदाय
नेपाल–भारतबीच सिर्फ भौगोलिक रुपले मात्रै जोडिएका छैनन् । बरु सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा पनि जोडिएका छन् । यसलाई ‘रोटी–बेटीको सम्बन्ध’ पनि भनिन्छ ।
पछिल्ला केही समयमा रोटीबेटीका साथसाथै यसमा क्रान्ति पनि जोडिएको छ । अर्थात नेपालमा जे राजनीतिक या सामाजिक क्रान्ति भयो, त्यसमा भारत र भारतका जनताको सहयोग छ । त्यसै गरी भारतमा राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा नेपाल आश्रयस्थल रह्यो र नेपाली जनताको सहयोग रह्यो ।
दक्षिण एसियामा पनि विभिन्न देशबीच आपसी सम्बन्ध र उनीहरुको साझा इतिहास रहेको छ । तर नेपालको मामलामा यो अलग छ । ब्रिटिस इन्डियाभन्दा पहिलेदेखि सम्बन्ध रहेको छ । नेपाल र भारत सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक रुपमा मात्रै जोडिएका होइनन् ।
दुई देशबीच प्राकृतिक सम्बन्ध पनि रहेको छ । किनकि हिन्द महासागरबाट निस्किएको मनसुन हिमालयमा टकराउँछ र त्यसबाट वर्षा हुन्छ । हिमालयको पहाडी शृङ्खलाबाट निस्किएका नदीकै कारण उत्तर भारतको जमिन उर्वर बनेको छ । दुई देशका जनता दुवै देशमा रोजगारी गर्छन् र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्छन् । साथै उनीहरुको वैवाहिक सम्बन्ध पनि रहेको छ ।
दुई देशबीच अद्वितीय सम्बन्ध
रोटी–बेटीका साथै दुई देशको सम्बन्धलाई खुला सिमानाले अद्वितीय बनाइरहेको छ, जो दक्षिण एसियामा कुनै दुई देशबीच यस्तो सम्बन्ध छैन । यसका साथै दुई देशको सीमानामा गाउँहरु यसरी बसेका छन्, कि कुन भारत हो र कुन नेपाल भनेर छुट्याउन समेत सकिदैन । यी क्षेत्रमा राज्यका सीमा परिवर्तन भइरहन्छ । वर्तमान सीमा सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिपछि अस्तित्वमा आएको हो । जो नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच भएको हो । तर यहाँ समाज पहिले देखि नै थियो, जो मैथिली, भोजपुरी र अवधी समाज थियो ।
नेपाल भारत सम्बन्धलाई यो खुला सीमानाले थप बलियो बनायो । यदि खुला सीमा हुँदैन थियो भने दुई देशबीच यति बलियो सामाजिक र साँस्कृतिक सम्बन्ध हुने थिएन । जब नयाँ राज्यको गठन प्रक्रिया सुरु भयो तब, त्यो समाजमाथि हावी हुन थाल्यो । राज्यको आफ्नो सीमा र आफ्नो संविधान हुनु स्वभाविक कुरा हो ।
मधेसीमाथि शंका गरिन्छ ?
यो सीमा क्षेत्र कागजमा खिचिएको एक राजनीतिक ‘बाउन्ड्री’ अर्थात सीमा हो । राजनीतिक सीमाका कारण सीमावर्ती इलाकामा बस्नेहरुप्रति केन्द्रको रबैया सधैं उपेक्षापूर्ण र सन्देहपूर्ण हुने आरोप लाग्दै आएको छ ।
नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्रमा रहनेहरु मात्रै बहुसंख्यक मधेसी होइनन्, बरु सिक्किम र उत्तराखण्डसँग जोडिएको सीमाको पहाडी इलाकाका मानिस पनि छन् । उनीहरुको भारतसँग आत्मीय सम्बन्ध छ । भारत र नेपालको सीमा क्षेत्रका मानिसहरुलाई हेर्ने अलग चस्मा रहेको छ । लामो समयसम्म नेपालको सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको बिहार–उत्तर प्रदेशको क्षेत्र निकै पिछडिएको थियो । पछिल्लो डेढ दशकमा यी सीमा क्षेत्रमा सडक–सञ्चारको सुविधा बढेको छ ।
उता, नेपालको तराई इलाकामा चार दशकअघि नै विकास धेरै भएको थियो । तर बीचको तराई इलाका विकासमा पिछडियो । यो क्षेत्रका जनताले भारत–नेपाल सम्बन्धमा सधैं परीक्षा दिनुपर्‍यो ।
भारत र नेपाल आफ्नो रुचीअनुसार सम्बन्ध निर्माण गर्दै आए र सीमा क्षेत्रमा जनताको अपेक्षामा तुषारापात हुँदै गयो । नयाँ संविधानको समयमा मधेसी समयदायले आन्दोलन गरे । संविधानले कुनै पनि देशको राजनीतिक यात्रा तय गर्छ ।
संविधानसभा उनीहरुले मधेसी बहुल राज्यमा राष्ट्रियतालाई लिएर परीक्षा दिन नपर्ने राज्य बनाउन माग गरे । सीमा क्षेत्रमा रहने मानिसको साँस्कृतिक, सामाजिक ऐक्यबद्धता आफ्नो पुरानो समाजसँग हुन्छ, जुन मैथिल, भोजपुरी र अवधि समाजसँग रहेको छ । तर राज्य या केन्द्रलाई उनीहरुको समर्थन पूर्ण रुपमा उतै छ जस्तो लाग्छ । यसकारण जब भारतसँग सम्बन्धको कुरा आउँछ, तब उनीहरुमा शंका उब्जिन्छ ।
मधेसी आन्दोलनलाई भारतका मानिसको सहानुभूति र समर्थन रह्यो । यसबारेमा नेपाल सरकारलाई लाग्छ कि जबसम्म उताका मानिसको सहानुभूति, ऐक्यबद्धता रहन्छ, तबसम्म मधेसीका तर्फबाट केन्द्रीय वर्चस्वमा हस्तक्षेप भइरहन्छ, जुन एक शंकाको अवस्था छ ।
दुवै देश सीमाको यथार्थलाई सम्झन्छन् ?
नेपाल र भारतले सीमाको यथार्थलाई सम्झिन चाहेनन् । कोरोना संकटको समयमा खुला सीमालाई एक वाहकका रुपमा बुझियो । यसका साथै अछुतजस्तो व्यवहार भयो र यसलाई बन्द गरियो, जुन भौगोलिक यथार्थको ठीक उल्टो थियो । दुई देशको सीमा क्षेत्रमा घर र बस्ती यस्ता छन् कि कुन देशको पर्छ भन्ने समेत थाहा हुँदैन ।
दुवै देशका मानिस एकअर्को देशका काम गर्छन् । सीमा बन्द गरिएपछि दुवैतिर मान्छेहरु रोकिए । दुवै देशका जनतालाई जान दिनुपर्दथ्यो । धेरै दिनसम्म नेपालमा भारतीय र भारतमा नेपालीलाई कोरोनाका लागि दोषी भएको आरोप लगाइयो । केही मानिस त जंगल र नदीबाट सीमा पार गरे । आज पनि नेपाल–भारत सीमा इलाकामा हरेक क्षेत्रमा मानिसहरु फसेका छन् । दुवैतिर संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ ।
कालापानी–लिपुलेकबारे के सोच्छन् मधेसी ?
नेपाल सरकार कालापानी लिपुलेकलाई निश्चित रुपमा आफ्नो भूमि मान्दछ । नेपालको संविधान जब आयो, हरेक पटक यस विषयमा मौनता रह्यो । मधेस आन्दोलनको क्रममा पनि ल्याइएको संविधानमा लिम्पियाधुरा,कालापानी, लिपुलेक थिएन । मधेसी जनता यो क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले आफ्नो मान्दट र नेपालकै हो भन्नेमा स्पष्ट छन् । यद्यपि मधेसी समुदायले पनि आफूहरुको मागलाई संविधान संशोधनमा सामेल गर्न माग गरिरहेका छन् ।
संविधान निर्माणको समयमा मधेसीले बलिदान गरे । मधेसीले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्दा मधेसीको भावनालाई समेत जोड्नुपर्ने माग गरे । किनकि नेपाल बहुजातीय र बहुसाँस्कृतिक छ र त्यसैका आधारमा प्रादेशिक संरचना हुन आवश्यक छ । मधेसीको माग भनेको राज्यको संरचना समावेशी होस्, भाषालाई मान्यता दिइयोस र नागरिकताको प्रक्रिया सहज होस् भन्ने हो ।
आजसम्म संविधानमा यी मागलाई सामेल गरिएको छैन । तर अब मधेसीको भनाई भनेको जमिनका लागि संविधान संशोधन हुनसक्छ भने यसमा यी मागलाई किन सामेल गर्न सकिदैन ? मधेसी समुदायको माग भनेको नयाँ मानचित्र, नयाँ चिन्हलाई संविधानमा सामेल गर्नका लागि सहमत छौं, तर आफूहरुको माग पनि संविधानमा सामेल गरियोस् ताकि उनीहरु भोलि राष्ट्रिय सहमतिका साथ छिमेकी देशसँग कुरा गर्न सकियोस् ।
कालापानी–लिपुलेकको विवादित मुद्दा पहिले नेपालका सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक दलले उठाउँदै आएका थिए । तर पहिलो पटक सरकारले यस्तो कदम उठाएको हो । यो निश्चित रुपमा ऐतिहासिक कदम हो र यसमा नेपालका राजनीतिक दलहरु एकमत छन् ।
नेपाल–भारतका नेतृत्वले समझदारी देखाउँदै कूटनीतिक बहस गर्ने संकेत गरेका छन् । तर भारतीय मिडियाले नेपाललाई यसरी प्रस्तुत गरे कि नेपाल भारतको एउटा शत्रु राष्ट्र हो । यद्यपि मधेसी जनताको अडान सरकारको अडानसँगै छ ।
नक्सा राष्ट्रवादमा नेपाल सरकार
भारत सरकारले जब नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, त्यसबेला पनि नेपाल सरकारले वार्ता गर्ने बताएको थियो । तर जब लिपुलेकमा सडकको उद्घाटन भयो, तब नेपाल सरकार पनि नक्सा राष्ट्रवाद लिएर आयो । पुरै नेपालमा दुई प्रकारका कुरा चलिरहेका छन् । पहिलो भारतको नयाँ नक्सा जारी भएपछि त्यसमाथि कूटनीतिक पहल नभएको र अर्को ओली सरकार कोरोना नियन्त्रणमा असफल भएपछि नक्साको राजनीति सुरु गरेको आरोप लागेको छ ।
नेपालमा राष्ट्रवादको मतलब भारतविरोधी राजनीति र स्वर हुनेगर्छ । कालापानीको सवालमा हरेक पटक सरकार मौन बस्यो । तर अब मधेसीलाई सोधिदैछ कि उनीहरु कतातिर छन् । मधेसीको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाइदैछ । जबकि मधेसीले राष्ट्रिय एकताको मुद्दामा संघीय सरकारसँगै रहेको स्पष्ट पारिसकेका छन् । यसका साथै दुई देशबीच खुला सीमा बन्द गर्ने एक मुद्दा पनि छ । दुवै देशमा केही यस्ता मान्छे छन्, जो नेपाल–भारतबीचको खुला सीमा चाँहदैनन् ।
(बीबीसी हिन्दीमा प्रकाशित चन्द्रकिशोरको लेखको नेपाली अनुवाद)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २०, २०७७, १५:४९:००
इथियोपियामा गायकको मृत्युबारे विवादमा झडप हुँदा १ सय ६६ जनाको मृत्यु
कोरोना संक्रमितलाई हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन र एचआईभीको औषधि बन्द